သာယာလှပတဲ့နေရာလေးမှာ ချစ်ရတဲ့မိသားစုနဲ့အတူ နေ့လည်စာစားနေတဲ့ဗွီဒီယိုလေးကို ပြသလာတဲ့ ချမ်းချမ်း – Cele Top Stars
သာယာလှပတဲ့နေရာလေးမှာ ချစ်ရတဲ့မိသားစုနဲ့အတူ နေ့လည်စာစားနေတဲ့ဗွီဒီယိုလေးကို ပြသလာတဲ့ ချမ်းချမ်း
August 12, 2021 By admin2Celebrity
ချစ်လှစွာသော ပရိတ်သတ်ကြီးရေ အဆိုတော် ချမ်းချမ်းကတော့ မိခင်မေတ္တာအပြည့်နဲ့ သမီးလေးကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးနေပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်လာလို့လည်း မရသေးတာကြောင့် သူ့ရဲ့ သမီးကြီး မြမိုးဂင်္ဂါကိုလည်း လွမ်းဆွတ်သတိရနေပါ တယ်တဲ့..။
အီတလီနိုင်ငံမှာပဲ နေထိုင်ရင်း သမီးငယ်လေး တဖြည်းဖြည်း အရွယ်ရောက်လာတာကို ကြည့်ပြီး ပီတိဖြစ်နေပါတယ်။ သမီးလေးရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို တင်ပေးလေ့ရှိတဲ့ ချမ်းချမ်းကတော့ အခုလည်း ပရိသတ်တွေ အချစ်ပိုစေမယ့် ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကို ဝေမျှပေးလာ ပြန်ပါပြီ..။
“ Having lunch at the top of the Mountain View restaurant!!so nice and peaceful နေ့လယ်စာဖိတ်ထားလို့ ဒီနေ့အပြင်ထွက်စားကြတယ် အရမ်းလှတဲ့တောင်ထိပ်မှာဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်လေး အခုမှရောက်ဖူးတာ လေလေးလဲအေးပြီးအစားအသောက်လဲစုံ။ သူငယ်ချင်းမဂ်လာဆောင်အတွက် လူစုံတက်စုံ ဆွေးနွေးကြ သူငယ်ချင်းတွေဆုံကြနဲ့။ ကိုယ်ကတော့ ယောင်လည်လည်ပေါ့ကွယ် ဘာမှလဲနားမလည် အိမ်ကိုပြန်ချင်တဲ့စိတ်ကတောင်တန်းတွေကိုမြင်တိုင်း အိမ်ပြန်ချင်စိတ်ထိန်းမရဘူး။ ကျရာနေရာမှာ အဆင်ပြေအောင်နေနေပါတယ် တနေ့တော့ အိမ်ပြန်ခွင့်ရမှာပါ 😥😥 ” လို့ ရေးထားပါတယ်။ဖတ်ရှူ့ပေးကြတဲ့ပရိတ်သတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိ်ုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်..။
ခဈြလှစှာသော ပရိတျသတျကွီးရေ အဆိုတျော ခမျြးခမျြးကတော့ မိခငျမတ်ေတာအပွညျ့နဲ့ သမီးလေးကို ပွုစုစောငျ့ရှောကျပေးနပေါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံကို ပွနျလာလို့လညျး မရသေးတာကွောငျ့ သူ့ရဲ့ သမီးကွီး မွမိုးဂင်ျဂါကိုလညျး လှမျးဆှတျသတိရနပေါ တယျတဲ့..။
အီတလီနိုငျငံမှာပဲ နထေိုငျရငျး သမီးငယျလေး တဖွညျးဖွညျး အရှယျရောကျလာတာကို ကွညျ့ပွီး ပီတိဖွဈနပေါတယျ။ သမီးလေးရဲ့ လှုပျရှားမှုတှကေို တငျပေးလရှေိ့တဲ့ ခမျြးခမျြးကတော့ အခုလညျး ပရိသတျတှေ အခဈြပိုစမေယျ့ ဗီဒီယိုဖိုငျတဈခုကို ဝမြှေပေးလာ ပွနျပါပွီ..။
“ Having lunch at the top of the Mountain View restaurant!!so nice and peaceful နလေ့ယျစာဖိတျထားလို့ ဒီနအေ့ပွငျထှကျစားကွတယျ အရမျးလှတဲ့တောငျထိပျမှာဖှငျ့ထားတဲ့ဆိုငျလေး အခုမှရောကျဖူးတာ လလေေးလဲအေးပွီးအစားအသောကျလဲစုံ။ သူငယျခငျြးမဂျလာဆောငျအတှကျ လူစုံတကျစုံ ဆှေးနှေးကွ သူငယျခငျြးတှဆေုံကွနဲ့။ ကိုယျကတော့ ယောငျလညျလညျပေါ့ကှယျ ဘာမှလဲနားမလညျ အိမျကိုပွနျခငျြတဲ့စိတျကတောငျတနျးတှကေိုမွငျတိုငျး အိမျပွနျခငျြစိတျထိနျးမရဘူး။ ကရြာနရောမှာ အဆငျပွအေောငျနနေပေါတယျ တနတေ့ော့ အိမျပွနျခှငျ့ရမှာပါ 😥😥 ” လို့ ရေးထားပါတယျ။ဖတျရှူ့ပေးကွတဲ့ပရိတျသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့နလေ့ေးတဈနကေို့ ပျိုငျဆိုငျနိုငျပါစလေို့ ဆုမှနျကောငျးတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော..။
နယ်အထိအိမ်တိုင်ယာရောက် လက်ဆောင်ပို့ပေးလို့ဝမ်းသာပြီး ပရိတ်သတ်အတွက်ကတိတစ်ခုပေးလိုက်တဲ့ ခြိမ့်ကေကို(ဘနားနား)
ပြေတီဦးရဲ့ အမှန်တရားဘက်ကနေ ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ ဂုဏ်ယူစရာကောင်းလွန်းတဲ့ အကြောင်းလေးတွေကိုပြောပြလာတဲ့ ပရိတ်သတ်တစ်ဦး